" Covid -19 နဲ့ နယူးယောက်မြို့ " - Yangon Nation News
By : နေတင်မြင့်(နယူးယောက်မြို့)
နယူးယောက်မြို့တော်ကြီးက ခြောက်ခြားစရာ သုသာန်တစပြင်လို တိတ်ဆိတ်နေ၏ နေရာတိုင်းအချိန်တိုင်း ကြားနေရသည်က (Ambulance) အရေပေါ်လူနာတင်ယာဉ်ဆေးရုံကားသံများသာ ၊ ဆေးရုံကားသံကြားလိုက်တိုင်း သြော် လူသားတယောက်တော့ သေမင်းနဲ့ နပမ်းလုံးနေရပြီ ၊ အနိူင်တိုက်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးရုံကလွဲ၍ ဘာမှမတတ်နိုင်…
နေ့ရောညပါ လူသူအသွားအလာ ထူထပ်ပြီး ကြက်ပျံမကျ စည်းကားနေသော ကမ္ဘာထိပ်ဆုံး စီးပွားရေးမြို့တော်ကြီးက ယခုတော့ ကိုဗစ်ကြောင့်နေ့စဉ်အရှိန်အဟုန်နဲ့ ပြေးနေသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးများလည်း ရုတ်တရက်ရပ်တန့်လိုက်ရ၏ ဘယ်သူမှ မထင်မှတ်ထားတဲ့ ကပ်ဆိုးကြီးက ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးအား ဝင်ရောက်ထိုးဖောက်ကာ ယခုဆိုလျင် ကိုဗစ်ကြောင့်တကမ္လာလုံးတွင် ရောဂါဖြစ်သူပေါင်း ၄.၆ သန်းကျော်၊ အသက်ဆုံးပါးသူပေါင်း သုံးသိန်းကျော်နဲ့ အမေရိကားတွင် ရှစ်သောင်းကျော်အသက်ဆုံးခဲ့ရပြီး
နှစ်သောင်းကျော် အသက်ကြီးငယ်မရွှေး ဆင်းရဲချမ်းသာမရွှေး လျင်မြန်စွာဖြင့် မိသားစုဘဝထဲက၊
တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့က စတင်လိုက်သော ကိုဗစ်ရောဂါကပ်ကြီးသည် ရက်ပိုင်း လပိုင်းအတွင်း ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးသို့ လျင်မြန်စွာ ကူးစက်ပျံနှံပြီး နိုင်ငံအသီးသီးက shut down/ lock down/ pause/
Stay home များလုပ်ကာ ပြည်သူများကိုလည်း အပြင်မထွက်ရ(essential workers မှလွဲ၍)
လူစည်ကားရာနေရာများ ယုတ်စွအဆုံးဘာသာရေးဘုရားကျောင်းများမှအစ ဝတ်ပြုခွင့် မပြု ၊ စုရုံးခွင့်မပြု
ပိတ်ပင်တားမြစ်ရလေ၏ နိုင်ငံတကာတွင် အဆိုးဆုံး အသေအပျောက်အများဆုံးက အမေရိကားဖြစ်ပြီး ထိုအထဲမှနယူယောက်မြို့ကြီးသည် အသေအပျောက်အများဆုံးဖြစ်လေသည်။ နေ့စဉ်လိုလို သတင်းများတက်လာသည်က ရာဂဏန်းကျော် နောက်ဆုံး အမြင့်ဆုံး တက်လာသည်က နေ့စဉ်သေးဆုံးနှုန်းက ထောင်ဂဏန်းနားပင် ကပ်လာပေ၏ ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့(WHO)ကြီး၏အဆိုအရ ကိုဗစ်ရောဂါကြီးသည် အလွယ်တကူနဲ့ ပျောက်ကွယ်သွားမည့်ရောဂါမျိုး မဟုတ်ဟု သတိပေးထုတ်ပြန်ထား၏ ဒါ့အပြင် ကိုဗစ်ရောဂါဆန်းကြီးသည် တိရိစ္ဆာန်မှကူးစက်ပြန့်ပွားလာသည်လား သို့တည်းမဟုတ် လူကလုပ်၍ ဝူဟန်ဓာတ်ခွဲခန်းက ယိုစိမ့်ထွက်လာသည်လား ဒွိဟ များစွာဖြင့် ရှိနေသည်သာ။ သေခြာသည်က အမေရိကန်နိုင်ငံအပါအဝင် ဥရောပ နိုင်ငံကြီးများက ကိုဗစ်လွန်ကာလတွင် တရုတ်နိုင်ငံအား တရားစွဲဆိုမှု့များ လျော်ကြေးတောင်းခံမှု့များ လုပ်ကြတော့မည်မှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပေ။ တရုတ်နိုင်ငံက ဘယ်လို ဖြေရှင်းမလဲ ဘယ်လို ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေ
ဘယ်လိုဖြစ်ကြမလဲ ပိတ်ကားပေါ်တွင် စောင့်မျော့်ကြည့်ရှု့ရန်သာ…
ကမ္ဘာစီးပွားရေးအရ အချက်အခြာကျတဲ့ နယူယောက်မြို့တော်ကြီးက မြို့နယ်စု( borough) ငါးခုနဲ့ ဖွဲ့ထားတာပါ မက်ဟန်တန် (manhattan)ဘရုတ်ကလင် (brooklyn) ကွင်း (queens) ဘရောင့် ( bronx)
နဲ့ စတေတန်အိုင်လန် (staten island) တို့နဲ့တည်ထားတာပါ ၊
ကိုဗစ်ရောဂါစတင် ဖြစ်လာပြီးပြည်သူကြားထဲမှာလည်းအထိတ်တလန့်ဖြစ်ကြ စားစရာသောက်စရာတွေ ပြေးဝယ်ကြ၊မျက်နှာဖုံး( mask )လက်သန့်ရှင်းပိုးသတ်ဆေးရည်(Hand sanitizer) ၊clorox ဆေးရည် ၊စတာတွေဟာ အရမ်းရောင်းကောင်းပြီး နေ့ချင်းညချင်း ရောင်းကုန်ပါလေရော ၊
( sold out). တခါမှ အစားအသောက်တွေမ ပြတ်လပ်ဘူးတဲ့ ဆူပါမတ်ကက်ကြီးတွေက အစားအသောက်တွေ ကုန်ပါလေရော၊ ဒီမှာက ထူးထူးဆနိးဆန်း ပြသာနာကြီး ဖြစ်၊ထိုးကြ နှက်ကြ ရဲတွေ အဓိက ဖြေရှင်းပေးရတာက အိမ်သားသုံးစက္ကူဝယ်တဲ့ ပြသာနာပါဘဲအဖြူတွေအနေများတဲ့ နေရာတွေမှာ ဈေးဝယ်လာတဲ့သူတိုင်းက အိမ်သာသုံးစက္ကူတွေ ဝယ်ပြီး ကြိုတင်းစုဆောင်းကြပါလေရော၊ တယောက်ကို သုံးလေးငါးထုပ်လောက်
ဝယ်တော့ ပြတ်လပ်ကုန်၊ အရမ်းကာရော ဝယ်တဲ့သူတွေဆီက လုယူကြ နဲ့….ပြသာနာအကြီးဆုံး ဖြစ်ခဲ့ရတယ်..ချွင်းချက်ကတော့ အာရှသားတွေက ဒီပြသာနာ ကြီးကြီးမားမားမရှိကြဘူး သူတို့က အစားအသောက်လောက်ဘဲ အာရုံစိုက်ကြတာ
အိမ်သာသုံးစက္ကူမရှိဘူးလား၊ အိုကေပါ ၊ ရေနဲ့ဘဲ သုံးလိမ့်မယ်ပေါ့အဖြူတွေကတော့ ဒီလို အကျင့်မရှိလေတော့ သူတို့အတွက် big issue ဖြစ်နေတာပေါ့ ၊
ဒီလိုနဲ့ မတ်လထဲမှာ ကူးစက်မှုအရမ်းမြန် အသေအပျောက်နှုန်းက တဖြေးဖြေးကြောက်ခမန်းလိလိမြင့်တက်လာပြီး ရုံးတွေ စားသောက်ဆိုင်တွေ
ကျောင်းတွေပိတ် အိမ်ထဲမှာဘဲနေ (stay home)
ဒီမှာက လွပ်လပ်မှု့ကို ခုံမြင်ကြသူတွေအိမ်းတွင်းပုန်းအဖြစ်၊ဒီလိုအစဉ်အလာမရှိကြလေတော့ ပြသာနာကြီးကစပြီ၊ ကိုဗစ်ကို လျော့တွက်တာရော လွပ်လပ်မှု့ကို မထိန်းချုပ်နိုင်တာရော ဂရုမစိုက်တာရော စတာတွေဟာ
ပျံနှံမှု့ တမုတ်ဟုတ်ချင်း မြင့်တက် သေဆုံးမှု့က ဒီရေအလား တဖြေးဖြေးမြှင့်တက်လာတာ တနေ့တနေ့ သေဆုံးမှု့ဟာ ရာဂဏန်းကနေ ထောင်နားကပ်လာတဲ့အထိ
အမြှင့်ဆုံး မြင့်လာ၊ ဆေးရုံတွေမှာလည့်း ပြွတ်ကြပ်သိပ် ထားစရာနေရာမရှိတော့ဘဲ ၉၁၁ အရေးပေါ်ခေါ်ပြီဆိုရင် စစ်ဆေးမှု့လုပ်(positive) ပေါ့စတစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်း ဆေးရုံမတင်တော့ဘဲ အိမ်မှာဘဲနေ (quarantine) လုပ်၊ ဆေးညွန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာ၊ ဆေးသောက်၊ အိပ်ရေးဝဝအိပ်၊ အစားအသောက်ပုံမှန်စား အပြင်မထွက်နဲ့
နောက်ဆုံး အသက်ရှုတာ အရမ်းဆိုးဝါးလာတော့မှေ ဆးရုံကိုခေါ့်ပြီး အသက်ရှုစက်တပ်ပေးတော့တာ အသက်ရှုစက်ကလည်း လတ်တလောမှာ ဖြစ်တဲ့ အရေေးပါ်လူနာနဲ့ မညီမျလေတော့ အဆိုးဝါးဆုံးလူနာတွေကို ဘဲတပ်ဆင်ပေးရတော့ တချို့တွေလည်း မဆုံးသင့်ဘဲ ဆုံးရတာပေါ့ ။အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး အမြန်ဆုံး ဆောင်ရွက်ပေးပေမဲ့လည်း လိုအပ်ချက်တွေကတော့ အများကြီးပါဘဲ ဒါကလည်း မကြုံဖူးရတဲ့ မဖိတ်ခေါ်ဘဲရောက်လာတဲ့ ကိုဗစ်ဧည့်ဆိုးကြီးကြောင့်ဘဲပေါ့။
နယူးယောက်မှာဆိုရင် စစ်တမ်းအရ ကြည့်လိုက်ရင် spanic ၃၄% black ၂၉% Asian ၇% သေဆုံးကြရတယ် ။ spanic & black တွေ သေဆုံးမှု့များရတာ က ရောဂါဆန်းကို လျော့တွက့်တာရော ဂရုမစိုက်တာရော ၊ ရောဂါကို ကာကွယ်ဘို့ အတွက်
မျက်နှာဖုံး လက်အိပ် တကိုယ်ရေးသန့်စင်မှု့ မရှိတာတွေကြောင့် ဘဲလို့ ကောက်ချက်ချရမှာဘဲ၊
ဒီကြားထဲသူတို့ဒီလိုရောဂါတွေခံစားရတာ၊ အလုပ်အကိုင်ပျက် အိမ်တွင်းပုန်းနေရတာ၊ တရုတ်ကြောင့် ၊ ခြုံပြောရရင် asian တွေကြောင့်ဆိုပြီး ၊ asian တွေ လမ်းမှာတွေ့ရင် ထိုးနှက်ကန်ကြောက်ကြ၊ ရထားပေါ်ကားပေါ်က ဆွဲချခံတဲ့အထိ၊ အဖြစ်များလာလို့၊ အစိုးရက ဥပဒေနဲ့ သတိပေးတားမြစ်ရသည်အထိ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
ဒီကာလမှာ ဆရာဝန်တွေ သူနာပြုတွေ ကအစ
essential wotkers တွေ ကို လေးစားဂုဏ်ယူမိတယ် တဖြုတ်ဖြုတ်သေနေတဲ့ ကြားထဲက သူတို့ရဲ့အသက်ကို မငဲ့ကွက်ဘဲ ပြည်သူ့ရဲလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆီးပေးကြတယ်၊
ဒီလိုနဲ့ယူးယောက်မြို့တော်မှာ အခြေအနေအရမ်းဆိုးရွားနေတဲ့အချိန်မှာ ကျနော်တို့ အဖွဲ့က ခေါင်းဆောင်များက မတ်လအလယ်လောက်မှာ phone conference ခေါ်ပြီး ဘာလုပ်သင့်သလဲ ? ဘာတွေကူညီသင့်သလဲ?
စတာတွေကို ဆွေးနွေးတော့ လုပ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာအရ မြန်မာနိုင်ငံသား ညီအကိုမောင်နှမတွေကို ကိုဗစ်နဲ့ပါတ်သက်ပြီး အတတ်နိုင်ဆုံးကူညီကြမယ် gofundme ဆိုတဲ့ websiteမှာ” support covid-19 myanmar- american families “တခုဖွင့်ပြီး ကျနော်တို့အဖွဲ့တဖွဲ့ချင်းဆီက မတည်ငွေလေးစထည့်ပြီး facebook ကနေ စတင် ကြော်ငြာလိုက်တယ် **
* ဒီနေရာမှာ ကျနော်တို့အဖွဲ့အကြောင်း အနည်းငယ် ဖော်ပြချင်ပါတယ် ကျနော်တို့ အဖွဲ့ National Humantarian Fundraising for Myanmar (NHFMM) (မြန်မာနိူင်ငံ အမျိုးသားလူမှု့ရေးရံပုံငွေအဖွဲ့)ကို လွန်ခဲ့သော သုံးနှစ်က စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ် ၊ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲဆိုတော့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အမေရိကန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာကြတဲ့ မြန်မာပြည်က ညီအကိုမောင်နှမတွေဟာ ဒီနိုင်ငံမှာ နေနေရပေမဲ့ ကိုယ့်မြေကိုယ့်ရေ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ စိတ်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ ရင်ထဲမှာ၊ကိန်းအောင်းနေလျက်ပါဒါကြောင့် တတ်နိုင်သ၍ ကိုယ့်အမိနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံသားတွေကို ကူညီပံပိုးကြရအောင်ဆိုပြီး New York city မှာ သာရေး၊နာရေး၊လူမှု့ရေးလှုပ်ရှားမှု့တွေမှာ တက်ကြွစွာ ပါဝင် နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကို ဦးဆောင်သူတွေနဲ့ အစည်းအဝေးလေးလုပ် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးအဖြေရှာရင်း နောက်ဆုံးတော့ အားလုံး ညီညွတ်စွာနဲ့ NHFMM အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတယ် ။ကျနောိတို့အဖွဲ့မှာ ၁. မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆရာဝန်များအသင်း ၂. မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာရှေ့နေ
များအသင်း ၃.တရုတ်မြန်မာကုန်သည်ကြီးများအသင်း ၄. တရုတ်မြန်မာအသင်း.
၅. ကုလသမဂ္ဂအဖွဲအစည်းဆိုင်ရာ မြန်မာအသင်းအဖွဲ့
၆. Burma point ၇. မြန်မာရခိုင်သင်္ကြန် အဖွဲ့ နှင့်အတူ ၈. တသီးပုဂ္ဂလ အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဦဆုံး ၂၀၁၈ခု မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ် ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည် ပြုစုပျိုးထောင်ရေးအတွက် ရံပုံငွေ အစားအသာက်ဈေးရောင်းပွဲလုပ်ပြီး ရရှိလာတဲ့ ငွေသား ဒေါ်လာ ၂၀၀၀၀/- ကျော်ကို ကုလသမဂ္ဂ ဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ရုံးကသံအမတ်ကြီး ဦးဟောက်ဒိုဆွမ်မှ တဆင့် ကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီး ဆီတိုက်ရိုက်ပေးလှုခဲ့ရတယ်။
ပြီးတော့ မိဘမဲ့ခလေးများကူညီထောက်ပံ့ရေး နဲ့ နောက်ဆုံးတခေါက်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ရေကြီးမှု့ အစားအသောက်ပြတ်လပ်မှု့ အဓိက ဒေသဖြစ်တဲ့ ကရင်ပြည်နယ် နှင့် မွန်ပြည်နယ် ဒေသ ၂ ခုကို ဒေါ်လာငွေ၂၀၁၉ ခုမှာ ဒေါ်လာ ၃၀၀၀၀ /- ကျော် ကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးချုပ်တွေဆီကို တိုက်ရိုက်ပေးပို့နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါ ကျနော်တို့အဖွဲ့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် တစိတ်တဒေသလေးပါ၊
ပြီးတော့ FB ကနေ အမေရိကားနေ မြန်မာညီအကိုမောင်နှမတွေကို ကူညီနိုင်မဲ့ အချက်တွေကို ဖော်ပြပေးခဲ့တယ်။ ဒီကာလမှာ ၉၁၁ အရေးပေါ်ခေါ်တာတို့ ဆေးရုံဖုန်းဆက်တာတို့ဟာ အခြေအနေအရ အရမ်းကြာမြင့်တယ်။ ဆရာဝန်များ သူနာပြုများ ဆေးရုံဝန်ထမ်းများဟာ ၂၄/၇ လူ့အသက်ပေါင်းများစွာကယ်တင်ဘို့အလုပ်လုပ်နေကြရပြီး ၊အနားယူချိန်အားလပ်ချိန်ဆိုတာ မရှိသလောက်ပါဘဲ။
ဒါကြောင့်အရေးပေါ်လိုအပ်လာရင် ကျနော်တို့ NHFMM အဖွဲ့ကြီးနဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင် လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ မြန်မာဆရာဝန်တွေ ၊ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးတွေ
ကို လိုအပ်တဲ့ အခါသူတို့အဆင်ပြေနိုင်မဲ့အချိန်ဖုန်း
ခေါ်နိုင်ပြီး ဆွေးနွေးတိုင်ပင် ညွန်ကြားချက်ရယူနိုင်တယ်။ မြန်မာရှေ့နေအသင်းကြီးကိုလည်း ဥပဒေရေးရာနဲ့ ပါတ်သက်လို့ တိုင်ပင်နိုင်ပါတယ် ၊
ကိုဗစ်ရောဂါခံစားနေရသူများ အစားအသောက်ဆေးဝါး လက်အိပ် မျက်နှာဖုံးကအစစ အခက်အခဲ ရှိသလား? ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျချက်ပြုတ်ပြီး အိမ်တိုင်ရာရောက် လိုက်ပို့ပေးတယ်၊ ဖြည့်ဆည်းပေးတယ် ၊ကံအကြောင်းမလှလို့ ဆုံးပါးသွားသူတွေကိုကူညီပံ့ပိုးမှု့အဖြစ် တဦးစီ$500 စီ ကူညီပံ့ပိုးပေးတယ်။
မိသားစုအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး တချို့ တွေကို ပိုမိုထောက်ပံပေးတယ် ၊ တချို့မိသားစုတွေက သူတို့ရဲ့သေဆုံးသွားတဲ့ အမိအဖညီအကိုမောင်နှမ တွေရဲ.
နောက်ဆုံး အနေနဲ့ ဓာတ်ပုံလေးဘဲဖြစ်ဖြစ် ဗီဒီယိုလေးဘဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့မြင်ချင်ကြတာကိုလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းနဲ့ညှိနှိုင်းပြီး လုပ်ဆောင်ပေးတယ်။ တချို့တွေကလည်း သေဆုံးတဲ့ ရုပ်ကလပ်ကို funeral service ကို ယူဆောင်ချင်ပြီး မီးသဂြိုလ်၊ ပြီးတော့ ပြာအိုးကို လိုချင်ကြတယ်။ funeral / မီးသဂြိုလ်စရိတ်က $3000 အထက်အနိမ့်ဆုံးရှိတယ်။ တချို့ဆူံးပါးသွားတဲ့ သူတွေဆိုရင် တယောက်ထဲ ၊ မိဘညီအကိုမောင်ဘွားဒီမှာမရှိ၊ ဆုံးသွားတာတောင် တရက်ကျော်မှ အလုပ်အတူတူလုပ်တဲ့သူက တံခါးသွားခေါက်ရင်း ၊ ပြန်ထူးသံမကြားရလို့ တံခါးတွန်းဖွင့်ဝင်မှ ဆုံးနေတာသိရတာ ဆိုးဝါးလှတဲ့ဘဝတွေ၊ ဒါနဲ့ကျနော်တို့ အဖွဲ့က နီးစပ်ရာစုံစမ်း မေးမြန်းပြီး နောက်ဆုံးကျတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သူ့ရဲ့ အဖေ အမေတို့နဲ့ အဆက်အသွယ်ရပြီး အကျိုးအကြောင်းပြောပြ နှစ်သိမ့် ဖျောင်းဖျ အကူအညီငွေလေး ပေး ၊ အဖေကလည်း မျက်စိသိပ်မမြင် ကျန်းမာရေးလည်း သိပ်မကောင်းတော့ အရမ်းခံစားရပါတယ်။
ဒီကပ်ဆိုးကြီးရဲ့ သားကောင်တွေပေးဆပ်လိုက်ရတာတွေဟာ ဖော်မပြနိုင်လောက်အောင်ပါဘဲ.
ဒါတွေကလည်း ကျနော်တို့ NHFMM အဖွဲ့က အတတ်နိုင်ဆုံး ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးပါတယ် တချို့ရောဂါပျောက်ကင်းတဲ့ ညီအကိုတွေဆိုရင်VOA နဲ့ အင်တာဗျူးတဲ့အခါမှာ ကျနော်တို့အဖွဲ့အကြောင်းနဲ
့ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဖော်ပြသွားတော့ ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ် ။
တချိ့လည်း FB wall ကနေကူညီပံပိုးတဲ့အတွက် အခုလို အကောင်းပကတိ ပြန်ဖြစ်ရတာဆိုပြီးကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဖော်ညွန်းသွားကြတယ် ။ ကိုယ့်ညီအကိုသားချင်းတွေကို တဒေါင့်တနေရာကနေ ကူညီပေးနိုင်တာကိုဘဲဝမ်းသာမိခဲ့တယ်၊
မကြာမှီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာလည်း FB ကနေ အခမဲ့စေတနာများစွာဖြင့်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြတဲ့ အဆိုတော်များနဲ့အတူ live လွင့်ဘို့ အကောင်အထည်ဖော်နေပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ ကိုဗစ်ရောဂါ ခံစားနေသူတွေ quarantine ဝင်နေရသူတွေကို တယောက်ထဲ အထီးကျန်မဟုတ်ဘူး အားမငယ်ပါနဲ့ ၊ ဘေးနားမှာ အနီးအနားမှာ NHFMM အဖွဲ့ကြီး ရှိနေပါတယ်၊ အားမငယ်ပါနဲ့ အကူအညီလိုရင် ခေါ်လိုက်ပါ အဆင်းသင့်ပါဘဲဆိုတဲ့ သတင်းလေးပေးချင်တယ်။
ပြီးတော့ အိမ်ထဲမှာ ငြီးငွေ့စွာ ဖြတ်သန်း နေရတဲ့သူတွေကို အဆိုတော်တွေဖြစ်တဲ့ ဆောင်းဦးလှိုင်၊ထွနိးအိင္ဒြာဗိုလ်၊ နီနီခင်ဇော် ၊ L လွန်းဝါ၊ဆုန်သင်ပါ၊ မေဆွိစတေဲ့ အဆိုတော်များက စိတ်သက်သာရာရစေရန် ၊ တခဏတာလေး စိတ်အပန်းပြေစေဘို့ အဆိုတော်များက၊ အားဖြည့်ကူညီပေးထားပါတယ်။
People walk around Washington square park as the coronavirus disease (COVID-19) outbreak continues in New York, U.S., March 22, 2020. REUTERS/Eduardo Munoz
အခု ကိုဗစ်ရောဂါကပ်ကြီးအတွက် ပထမဦးစွာ New York City ကို အခြေခံပြီး ကူညီလုပ်ဆောင်ရင်း New York stateတခုလုံးနဲ့ Tri- states ဧရိယာတွေဖြစ်တဲ့ New York, New Jersy(NJ) & Connecticut(CT)တို့ကို တိုးချဲပြီးကူညီဆောင်ရွက် ပေးဘို့အတွက် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိနေပါတယ်။ ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့နေရာ ၊ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် ၊ကိုယ့် နိုင်ငံသားများရဲ့လိုအပ်ချက်တွေ ၊ ကူညီရတာကို ဘဲ ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရင်း….
ကမ္လာသူ ကမ္ဘာသားအားလုံး ကိုဗစ်ရောဂါကပ်ဆိုးကြီးမှ အမြန်ဆုံး ကင်းဝေးကြပါစေလို့…
ဟန်နီချို ရဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင် Mask ဖက်ရှင်